नेपालगन्जमा चर्चामा छन् विवेकशिल साझा पार्टिका उम्मेदवार डा. कर्ण, तिब्र प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि सबै उम्मेदवारको जित्ने दावी – Etajakhabar
नेपालगन्जमा चर्चामा छन् विवेकशिल साझा पार्टिका उम्मेदवार डा. कर्ण, तिब्र प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि सबै उम्मेदवारको जित्ने दावी
नेपालगन्ज १६ कार्तिक । पछिल्लो समय राजनितीक मैदानमा आएको विवेकशिल साझा पार्टिका उम्मेदवार डा. विनोद कर्णले पार्टिलाई चिनाउन र जनतालाई विवेकशिल साझा पार्टिका उम्मेदवारले पनि केहि गर्न सक्छन भनेर देखाउन उम्मेदवारी दिएको बताए । जनताले चाहे आफुले जित्ने कर्णको भनाई थियो । उम्मेदवारी दर्ता गराउन आएका केहि अनुहार नयाँ थिए भने केहि पुराना पनि तर सबैको दाबि आफ्नो जित सुनिश्चत भएको नै थियो । संघिय समाजवादि फोरमको तर्फबाट बाँके क्षे नं. २ का प्रतिनिधी सभा सदस्य उम्मेदवार मो इस्तियाक राई पहिले पनि आफुले जनताकै हितमा काम गरेकाले भोट पाउनेमा ढुक्क रहेको र जित्ने विस्वास लिएका छन । केहिले आफ्नो संगठन बलियो भएकोले जित्ने दाबि गर्दै थिए भने राजपा का तर्फबाट बाँके क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधी सभा सदस्य उम्मेदवार विजय गुप्ता आफ्नो योगदान हेरेर जनताले जिताउने बताए । पार्टि एकिकरण सहितको लक्ष्य लिएर चुनावी एकता गर्दै मैदानमा उत्रेका एमाले र माओवादिका उम्मेदवारहरु दलबलसहित एकैसाथ दर्तास्थल पुगे । केहि नेता कार्यकर्ताहरुले उम्मेदवारीमा चित्त नबुझेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि पोखिरहेका बेला उम्मेदवारहरु भने ति असन्तुष्टिले घाटा नगर्ने दाबि सुर्य चिन्ह लिई बाँके क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्यका उम्मेदवारी दर्ता गराएका पशुपतिदयाल मिश्रले जित आफ्नै हुने बताए ।
मिश्रको जस्तै भनाई थियो एमाले माओवादि गठबन्धनबाट बाँके क्षेत्र नं. ३ को प्रतिनिधी सदस्य उम्मेदवार एमालेका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष नन्दलाल रोकायाको । बाँके क्षेत्र नं. १ मा माओवादि केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएका नेता महेश्वर गहतराज अथक दुई पार्टिको साझा उम्मेदवारको रुपमा उम्मेदवार हुन पाउँदा गौरव लागेको र आफ्नो जित सुनस्चित रहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधी सभा क्षेत्र नं. ३ का उम्मेदवार पुर्व सांसद बादशाह कुर्मी बाम गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि उच्च रहेको र त्यसले नेपाली काँग्रेसलाई फाईदा गर्ने बताए ।
काँग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रीक गठबन्धन अन्तर्गत राप्रपाबाट बाँके क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधी सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका ओमप्रकाश आजाद दुबै पार्टिको उत्तिकै पकड भएको क्षेत्रमा आफु साझा उम्मेदवार भएकाले आफुहरुको जित सुनिश्चित रहेको बताउदै थिए । केन्द्रमा राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएपनि बाँकेमा भने दुवै दलहरुले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १६, २०७४ समय: १९:४८:४९